मान्छे किन कोही गोरो कोही कालो हुन्छ ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ सौन्दर्य स्वास्थ्य ∕ मान्छे किन कोही गोरो कोही कालो हुन्छ ?
मान्छे किन कोही गोरो कोही कालो हुन्छ ?
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७६ असार १८ गते, १३:१३ मा प्रकाशित
छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ
कोहि व्यक्ति देख्ने वित्तिकै मस्तिष्कले भेउ पाइहाल्छ, यो व्यक्ति कालो वा गोरो छ । आखिर किन हुन्छ , व्यक्ति गोरो र कालो ?
मानिसको शरीरको छालामा रंग दिने कोष हुन्छ । यस कोषलाई मेलानोसाइट भनिन्छ । मेलानोसाइटको संख्या हरेक व्यक्तिको शरीरमा बराबर नै हुन्छ । मेलानोसाइटले छालामा रंग निकाल्छ । छालामा रंग फ्याल्ने क्षमता चाहि व्यक्ति पिच्छे फरक —फरक हुन्छ ।
अमेरिकनहरुको छालामा मेलानोसाइट कोषले फाल्ने रंग बढी हुन्छ । नेपालीहरुको छालामा मेलानोसाइटले फाल्ने रंग न्युन हुन्छ ।
के के गर्छ मेलानोसाइटले ?
मेलानोसाइटले मेलानिन बनाउँछ ।
मेलानिनले घामबाट जोगाउन सहयोग गर्छ ।
मेलानिनले क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ ।
चाउरीपना आउँदैन ।
यहिं मेलानिनले नै छालालाई रंग दिएर गोह्रो वा कालो बनाउँछ ।
जसको छालामा मेलानिन बढी हुन्छ त्यो कालो वर्णको हुन्छ । जसको छालामा मेलानिन न्युन हुन्छ त्यो व्यक्ति गोरो देखिन्छ । नेपालीको छालाको रंगलाई उत्तम मानिन्छ । अधिकाशंकाले छाला न त धेरै गोरो न त कालो हुन्छ । त्यसैले नेपालीको छालालाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । नेपालीको छाला गहु जस्तो न कालो न त सेतो भएको कारण गहुगोरो मानिन्छ । यस्तो छालामा छिटै चाउरीपना आउँदैन ।
नेपालीहरुको छाला प्रायः सुख्खा हुन्छ । वातावरणीय कारणले हाम्रो छाला सुख्खापन देखिएको हो । अर्को कुरा घामले पनि व्यक्तिको छालालाई असर गर्छ । दिउसोको चर्को घाममा हिंडदा त्यसको असर अनुहार लगायत खुला भागमा पर्छ । अल्ट्राभायोलेट किरणले पनि छालालाई असर गर्छ । घाममा निस्कनु पर्दा टोपि, कालो छाता, चश्माको प्रयोग गर्नु पर्छ बाहिर निस्कनु भन्दा १५ मिनेट पहिले सनस्क्रिन लगाएर हिंडनु पर्छ । सनस्क्रिन लगाउँदैमा शतप्रतिशत घामबाट जोगिन सकिंदैन । यसको लागि अन्य उपायहरु अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।